Prof. Maxamed Cumar Dalxa ayaa wuxuu sheegay in lagu deg degay taageerada, ay Dowladda Somaliya u muujisay Boqortooyada Sacuudi Carabiya. – STAR FM SOMALIA
Xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa wuxuu sheegay in lagu deg degay taageerada, ay Dowladda Somaliya u muujisay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya, ayaa Isniintii taageero loogu muujiyay Sacuudiga, xilli khilaaf xoogani uu kala dhaxeeyo Dowladda Iran.
Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ah Gudoomiye Ku Xigeenka Guddiga Arrimaha Dibadda Baarlamaanka, ayaa sheegay inaanan Guddigooda lagala tashan taageeradaasi, xilli sida uu sheegay ay matalaan shacabka Somaliyeed.
Gudoomiye Ku Xigeenka, ayaa sheegay inay wax khaldan u arkaan in Dowladdu ay fara-gelin ku sameyso xurgufta ka dhex taagan Sacuudiga iyo Iran, maadaama sida uu sheegay aanu boos kaga bannaanayn Somaliya.
Waxaa kaloo uu sheegay in laga muhiimsan yahay taageero sidaa u buuran in loo muujiyo Sacuudiga, haddii aanu Safaarad ku lahayn Somaliya, xilli uu sheegay in Iran ay Safaarad ku leedahay Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday inaanu Sacuudigu xushmad badan u hayn shacabka Somaliyeed, markastana uu xabsiyada ka buuxiyo hooyooyinkii Somaliyeed oo xilliga dhalmada ku jira, isla-markaana uu u soo tarxiilo Somaliya.
Xildhibaan Dalxa oo siyaabooyin kala duwan ula hadlay Warbaahinta, ayaa xusay in Somaliya ay texgelin badan u hayso Boqortooyada Sacuudi Carabiya, tiiyoo jirto aanay Sacuudigu ixtiraamin Somalida.